Midowga Yurub oo malaayiin doolar ku bixinaya hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya – SBC
Midowga Yurub oo malaayiin doolar ku bixinaya hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya
Posted by admin on March 30, 2011 Comments
Ururka midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday bixinta dhaqaale malaayiin doolar gaaraya oo uu ku bixinayo hawlgalka ciidamada AMISOM ee ay ka wadaan Soomaaliya ee ay ku taageerayaan dawlada KMG ah oo hardan dagaal kula jirta xoogaga Islaamiyiinta.
93 milyan oo doolar oo hor leh ayuu shaaca ka qaaday ururka midowga Yurub inay siinayaan AMISOM sida lagu sheegay natiijada shir ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya kaasi oo ay yeesheen wasiirada dhaqaalaha ee dalalka Afrika.
Andris Piebalgs oo ah madaxa dhaqaalaha Midowha Yurub ayaa shaaca Yurub uu yahay talaabo la doonayo in lagu dardar galiyo ama lagu dhiirigaliyo hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya kaasi oo uu ku sheegay in uu yahay mid dib loogu soo celinayo amaanka iyo xasiloonida.
“AMISOM waxay ka wadaa Soomaaliya shaqo wanaagsan, xaqiijinta xuquuqda aadamaha, rayidka oo la daafaco, iyo in dadka barakacayaasha ah iyo qaxootigu ay dib ugu soo laabtaan guryahooda iyagoo bad qaba oo kalsooni leh” ayuu yiri Andris Piebalgs.
“Ma jirayso wax horumar ah hadii aanay jirin nabad” ayuu hadalkiis ku darey u qaybsanaha arimaha horumarinta midowga Yurub oo ka hadlayey xaaladaha amaan ee Soomaaliya, isagoo sidoo kale daaha ka qaaday in dhaqaalahan uu yahay mid socdey ilaa iyo sanadkii 2007-dii oo midowga Yurub uu ku bixinayey hawlgalka AMISOM, waxaana guud ahaan mudadaasi uu midowga Yurub siiyey AMISOM aduun lacageed oo gaaraya 208 milyan oo doolarka Mareykank.